सुरक्षा -विधान आचार्य – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१३ मंसिर २०७७, शनिबार ०८:१९ English
सुरक्षा -विधान आचार्य
बेलुका साढे छ बजेको थियो होला, नेहाको साथीले फोन गरेर घरबाहिर सडकमा आउन भन्यो । फुत्त निस्कन लागेकी थिई, आमाले सोधिन, यतिबेला कता जान लागेकी ? ‘साथीले फोन गरेको, कलेजको के प्रोग्राम छ रे, त्यसको कागत लिन आऊ भनेर बोलाको छ ।’ आमाले आँखी भौँ तानेर सोधिन ‘कस्तो साथी हो ?’ नेहाको कन्सिरी तातेर आयो – ‘ए बाब्बा, कलेजमा सँगै पढ्ने साथी हो’; ‘भैगो जाऊ’ – आमाले उदारता देखाएर भनिन – ‘विवेकलाई पनि साथी लिएर जाऊ’ ।
नेहाको पारा झन् चड्यो – “अठार वर्षकी दिदीलाई साथी दिन एघार वर्षको भाइ ? क्यै परेमा म बरु आफ्नो रक्षा आफै गर्न सक्छु, भाइ सक्छ?” आमासित बाझी ऊ । “कस्तै भए पनि केटो भनेको केटो हो, लिएर जा !! तेरै सुरक्षाका लागि भनेको । ” – आमा फेरि पडकिइन् ।
यो सबै तमासा विवेक हेरिरहेको थियो । आमाको जिद्दी ऊ जान्दथ्यो, दिदीको तर्क सधैँ हार्थ्यो । अनि दिदीसित गएर दिदीले केटासित कुरा गरिन्जेल छेउमा उभिएर कुर्नु उसको काम हुन्थ्यो । त्यस दिन पनि गयो । अगाडिको मोडमा दिदीको साथी मोटरसाइकलमा आयो । दिदीलाई केही किताब र लिफलेटजस्तो केही दियो । दिदीको काँधमा हात राखेर – ‘ल त बाई’ भनेर गयो ।
विवेक त्यतिन्जेल पर्खालको भित्तामा अडेस लगाएर उभिएको थियो । त्यत्तिबेला उसको साथी समीप साइकल लिएर खेल्दै आयो । केटो न हो, विवेक पनि बुरुक्क उफ्रेर उसको साइकलमा पछिल्तिर बस्न गयो । साइकल ढल्पलायो । समीपले भन्दै थियो – “म डबल लोड गर्न सक्दिन है !!” हेर्दा हेर्दै साइकल लड्यो, साइकलसित समीप र विवेक पनि पछारिए । समीपले त एक हातले भित्तोमा समात्न भ्यायो, तर विवेकको भने कुहिनो बजारियो, साइकल र समीप पूरै उसै माथि परे । विवेकको कुइनोमा घाउ भयो, रगत आयो ।
नेहा दौडिदै भाइ भएतिर आई, घाउ देखेर गाली गरी – “तँलाई किन त्यसको साइकलमा चढन परेको नि, हेर घाउ बनाएर ? फेरि भाइलाई नहेरेको निहुँमा घरमा गएर मैले नै गाली खाने त होला नि ? गधा मोरो !!” विवेक झन् रुन थाल्यो, उभिँदा गोडा पनि खोच्यायो । गोड़ामा पनि घाउ भएको हुन सक्थ्यो । नेहाले भाइलाई काँधमा राखेर सहारा दिँदै घरतिर गई । नभन्दै गोडामा पनि चोट लागेछ, हिँड्दै जाँदा रगत आयो ।
घरको ढोकामा पुगेर एक हातले भाइलाई सम्हाल्दै अर्को हातले अफ्ठ्यारो गरी ढोका खोल्न लाग्दा आमाले माथिबाट देखिन् । साँझ झमक्क थियो, लोडशेडिँग पनि थियो, आमाले त्यो विवेक हुन सक्ला भन्ने सोच्दा पनि सोचिनन । एक तला माथिबाटै अनायास उनका मुखबाट प्रश्न आयो – “यो कसलाई लिएर आएकी ??” नेहाले जवाफ दिई – “यो तपाइँले पठाउनु भएको मेरो ‘सुरक्षा’ हो, ल सम्हाल्नुस आफै – दुई तीन ठाउँमा चोट लगाएर आएको छ !” आमाले आँखी भौँ उचालेर नेहालाई एकछिन पुराण सुनाइन र नेहाको ‘सुरक्षा’लाई स्याहार गर्न थालिन ।
११ आश्विन २०६९, बिहीबार २१:३९ मा प्रकाशित